सिल्टल शेयरहरू शीर्ष6विशेषताहरू वेब डेटा एक्सटेक्टरको
वेब डेटा एक्सटेक्टर यो सबैभन्दा प्रभावशाली र प्रसिद्ध उपकरण हो. यो विभिन्न सामाजिक मिडिया साइटहरू, गतिशील साइटहरू, यात्रा पोर्टल, खरीदारी वेबसाइटहरू र निजी ब्लगहरूबाट जानकारी स्क्रैप गर्न प्रयोग गरिन्छ.
तपाईं वेब डेटा एक्सटेक्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र स्क्रैप डेटा विशेष यूआरएलहरू, मेटा ट्यागहरू, मेटा शीर्षकहरू र विवरणहरूबाट. तपाईं यस डेटाको साथ छोटो छोटो र लम्बाई पूरै कुञ्जीशब्दहरूमा आधारित तपाईंको डेटा व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ. वेब डेटा एक्सटेक्चरको प्रमुख फाइदाहरू तल छलफल गरिएको छ.
1. सबै मा एक उपकरण:
वेब डेटा एक्सटेक्टर एक आवृत्ति हो र एकै समयमा धेरै कार्यहरू गर्दछ।. यो केवल एक व्यापक स्क्रैपर तर एक शक्तिशाली वेब क्रलर मात्र छैन. वेब डाटा एक्सटेक्टरको साथ, तपाइँ सजिलै संग तपाईंको साइटमा स्क्रैप गरिएको सामग्री प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको वेब पृष्ठहरूलाई राम्रो खोजी इन्जिन रङको लागि क्रल गर्न सक्नुहुन्छ।. यो सेवाले तपाईलाई सही र समयमै नतिजा प्रदान गर्न विभिन्न इमेल ठेगानाहरू, फोन नम्बरहरू र फ्याक्स नम्बरहरूबाट जानकारी पनि निकाल्छ.
2. गोपनीयता र सुरक्षा:
अन्य साधारण डेटा स्क्रैपर्स विपरीत, वेब डाटा एक्सटेक्चरले तपाईंको सुरक्षा र सुरक्षा इन्टरनेटमा सुनिश्चित गर्दछ।. एकपटक डेटा स्क्रैप गरिसकेपछि, यो सफ्टवेयरले सुरक्षित डेटाबेसमा बचत गर्दछ र तपाईँको हार्ड ड्राइभमा फाइलहरू डाउनलोड गर्न सजिलो बनाउँछ।. जो कोहीले तपाईंको स्क्रैप गरिएको सामग्रीलाई कहिल्यै पहुँच गर्दैन. वास्तवमा, तपाइँ आफ्नो नाजुक फाइलहरू पासवर्डको साथ सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ.
3. पूर्ण स्प्याम सुरक्षा:
वेब डाटा एक्सटेक्टरले तपाइँको डेटालाई खराब बटहरू र स्प्यामबाट सुरक्षित गर्दछ. यो सर्वोत्तम हो यसको प्रयोगकर्ताको अनुकूलन इन्टरफेसको लागि र तपाईंलाई केवल प्रामाणिक र सही डेटा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ. यो सेवाको साथ, तपाईं गुणवत्ताको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन. सबै URL हरू गुप्त डेटाबेसमा प्रशोधन गरिन्छ र जानकारी यसको व्यक्तिगत डेटाबेसमा भण्डारण गरिएको छ. साथै, यो उपकरणले डेटा फिल्टरहरू, पाठ फिल्टरहरू, र डोमेन फिल्टर प्रदान गर्दछ. यसले हामीलाई प्रयोगकर्ता-चयन पुनरावर्ती अनुमति दिन्छ.
4. उद्यमहरूको लागि ठूलो वेब सामग्री:
हामीले सामना गर्ने एउटा प्रमुख समस्या भनेको सामग्रीको गुणस्तर र शुद्धता हो. हामी धेरै धेरै हिज्जे वा व्याकरण त्रुटिहरूसँग लेख प्रकाशित गर्न सक्दैनौँ. वेब डाटा अन्वेषकले हाम्रो वेब सामग्रीमा स्वचालित रूपमा अल्पसंख्यक र अल्पसंख्यक त्रुटिहरू समाधान गर्दछ. साथै, यो अनुप्रयोगले ठूलो संख्यामा साइटहरू स्क्रैप गर्दछ र उद्यमहरूको लागि उपयुक्त छ.
5. विभिन्न संस्करणहरू उपलब्ध छन्:
तपाईं यसको नि: शुल्क र सशुल्क संस्करणहरू एकै समयमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ. स्टार्टअपहरू, फ्र्यानल्यानरहरू र वेबमास्टर्सहरूको लागि, वेब डाटा एक्सटेक्टर आयात गर्न एक राम्रो विकल्प हो. io. मध्यम र ठूला आकारको व्यवसायहरूको लागि, यसको सशुल्क संस्करण उपलब्ध छ. सफ्टवेयर धेरै pricey होइन र तपाईंको लागि सबै रोचक विकल्पहरू र सुविधाहरू अनलक गर्छ. यसले हजारौं साइटहरूबाट जानकारी लक्षित गर्न पेटेंट मेशिन सिकाइ र भिजुअल एस्ट्रोजन प्रविधिको प्रयोग गर्दछ. वेब डाटा एक्सटेक्टरको साथ, तपाइँ सेकेन्डको बिषयमा विभिन्न निष्कर्षण एजेन्सीहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन.
6. बुद्धिमानी साइट नेभिगेसन:
वेब डाटा एक्सटेक्टरले विभिन्न वेब पेजहरू मार्फत नेविगेट गर्दछ र तपाइँलाई कुनै पनि समय शीर्ष-सूचना जानकारी प्राप्त गर्दैन।. तपाईं केवल डेटा हाइलाइट गर्न र यसलाई बाह्य र बाह्य लिङ्कहरू पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ. सफ्टवेयर संकलन र डेटा व्यवस्थित गर्नेछ. तपाईं दुई देखि तीन मिनेटमा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. वेब डाटा एक्सटेक्टरले अहिलेसम्म 1 मिलियन भन्दा बढी वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न दाबी गरेको छ Source .